Education – Ariel's Style
By arielthi2020 15/09/2020 24/12/2021
how to write an essay in english ielts https://freeessaywriter.org/ how to writeasummary critique
A Year ago when I moved back to Yangon after living in Bangkok City, I quickly saw from both personal and professional experience that the fashion industry itself is often unreliable to the average woman, making it challenging to navigate on her own. I realized you could have all the clothes you ever wanted but if you didn’t understand body type, authentic personal style, and how to put it all together it wouldn’t make getting dressed any easier.
This isacareer development programme, designed for individuals wishing to retrain or beginabrand new career asaqualified personal stylist, image consultant, and certified Style Coach. You’ll have access to all the very best knowledge, tools, resources, and support you need to take your styling career to the highest levels!
Can change the way you feel ?
BecomingaCertified Style Coach
ပညာရေးသည်…ကျွမ်းကျင်စနစ်ကျတဲ့ Professional ကျကျ စီးပွါးရေးတိုင်းရဲ့ ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းပါ။ Ariel တို့ နိုင်ငံတစ်ကာ လည်ပတ်ဖူးတဲ့သူတွေ အတွက် အမြင်အတွေ့ကြုံတွေရှိကြမှာပါ၊ Asian & Europe စတဲ့ အရှေ့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ လူနေမှု ပတ်ဝန်းကျင် ရာသီဥတုမတူကြတဲ့နိုင်ငံတွေ ရဲ့ Fashion တွေကလဲမတူကြပါဘူး။ Ariel တို့နဲ့ အနီးစပ်ဆုံး အိမ်နီးချင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ Bangkok မှာ ကိုယ်တိုင်လွန်ခဲ့သော ၂နှစ်က နေထိုင်ပြီးနောက်ရန်ကုန်သို့ပြန်လာသည့်အခါဖက်ရှင်သည် သာမာန်အမျိုးသမီးတစ်ဦး အတွက်မကြာခဏ စိတ်ချမ်းသာမှု အတွက် ကြောင့်ကျရကြောင်းနှင့်၊ လိုချင်တာနဲ့ လိုအပ်တဲ့ အဝတ်တွေအားလုံးကိုလွယ်လွယ်ကူကူ ဝယ်ယူသုံးစွဲဖို့ အမြဲရှိကြောင့်သိလိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့် မိမိခန္ဓာကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ စစ်မှန်တဲ့ကိုယ်ပိုင်စတိုင်နဲ့ အားလုံးကိုဘယ်လိုပေါင်းစည်းရမယ်ဆိုတာကို နားမလည်ဘူးဆိုရင်တော့ ကိုယ်ပိုင်ဟန် စတိုင်ကို လွယ်လွယ်ကူကူ ဝတ်ဆင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလိုအကြောင်းရာတွေနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ Fashion Stylist / Image Consultant / Personal Stylist စတဲ့ အလုပ်အကိုင်တွေကတော့ Fashion Expected jobs တွေဘဲဖြစ်ပါတယ်။
Arielthi တို့၏သင်တန်းအကြောင်း Fashionအသက်မွေး၀မ်းကျောင်းမှုဆိုင်ရာတိုးတက်မှုအစီအစဉ်ဖြစ်ပြီး၊ အရည်အချင်းပြည့်ဝသောကိုယ်ပိုင်စတိုင်လ်ရှိသူ၊ အလှအပအမြင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံနှင့်အသိအမှတ်ပြု Style Coach အနေဖြင့်အသစ်စက်စက်အသက်မွေး၀မ်းကျောင်းမှုကိုစတင်လိုသူများအတွက်ရည်ရွယ်သည်။ သင်၏အကောင်းဆုံးသောအသိပညာ၊ အရင်းအမြစ်များနှင့်သင်၏ပုံစံကိုအသက်မွေး၀မ်းကျောင်းမှုအဆင့်အမြင့်ဆုံးသို့သင်ရရှိရန် မွေးထုတ်ပေးနိုင်ပါသည်။